Monte-Carlo Beach Hotel: GOLD zvakagadziriswa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Monte-Carlo Beach Hotel: GOLD zvakagadziriswa
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hotera & Resorts • Monaco Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Green Globe nguva pfupi yadarika yakapa iyo Monte-Carlo Beach Goridhe Status mukubvuma kwemakore mashanu akateedzana ekupa chitupa.
Monte-Carlo Beach Hotel's yakazara yekusimudzira manejimendi hurongwa yakafukidza akasiyana siyana ezvakatipoteredza uye magariro zvirongwa mukati memakore uye chivakwa chiri kuenderera nekukurudzira pamwe yazvino girini nhau.
Monte-Carlo Gungwa Inoenda Zvakasikwa
Kubva 2013, Monte-Carlo Beach restaurant Elsa yakapihwa Bio (organic) chitupa neEcocert, mutungamiri weFrance mune organic chitupa.
Elsa ndiyo yekutanga gourmet restaurant muProvence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) dunhu kuti uwane chikamu chakakwira kwazvo chikamu 3 Organic Certification. Mwaka unotevera muna 2014, iyoresitorendi yakawana nyeredzi yeMichelin Guide nekuda kwetarenda uye nehunyanzvi hweManeja Chef Paolo Sari uye mhando yezvitsva, zvemuno uye zvehunhu zvigadzirwa. Nhasi maresitorendi mashanu kuMonte-Carlo Beach Hotel (Elsa, Le Deck, La Vigie Lounge & Restaurant, Cabanas neLa Pizzeria) vanoshandisa 100% michero yemiriwo nemiriwo. Organic zvigadzirwa zvinowanikwawo kumabhawa, minibars uye kununurwa nekamuri basa.
Spa iri kuMonte-Carlo Beach inopawo ekurapa kwepamusoro-soro ekurapa ganda nePhytomer Cosmetics, yakasarudzika mafomu echisikigo anopa nzira nyowani yekuchengetedza runako rwe organic. Kupfuurirazve, hotera yacho inofarira Casanera organic shambuu, gel yekugezesa uye mafuta emuviri zvigadzirwa izvo zviri 100% zvakagadzirwa muCorsica. Imba yacho inovavarira kuwedzera mutemo wayo wehupenyu kuburikidza nekuunzwa kwezvimwe zvigadzirwa senge zvinoraswa mbichana mbichana uye Fairtrade kofi yakasikwa inogadzirwa neecko-inotungamira French brand Malongo.
Muna 2014, Monte-Carlo Beach yakasaina Iyo Relais & Chateaux Vision kuUNESCO muParis. Chiratidzo ichi chinokurudzira vanasaina kuti vaite zvirongwa zvakawanda zvine mutsigo zvinosanganisira rutsigiro rwevarimi vemuno nevabati vehove, kuchengetedza nekusimudzira zvipenyu zvakasiyana, kukurudzira kuredza zvine hunyanzvi, kuderedza tsvina yezvokudya, kuchengetedza simba nemvura, uye nekupa mamiriro akanaka ekushanda. uye mihoro kuvashandi.
La Route du Gout (Iyo Nzira yekuravira)
Monte-Carlo Beach yakabatana na Chef Paolo Sari weLa Route du Gout, mutambo we organic organic gastronomy. Chef Paolo ndiye chete akasimbiswa organic Michelin nyeredzi chef munyika. Chinangwa chemutambo uyu ndechekubata munhu wese - nhengo dzeveruzhinji, vana, vatungamiriri nemasangano - kuitira kusimudzira zvirongwa zvezvakatipoteredza uye nekupa mari zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira Kutenda kune Bio Chef Global Spirit Association yakatangwa naChef Paolo Sari, mapurojekiti ekubatsira kuvaka Moné & Paolo Sari Culinary Chikoro cheArt & Hospitality ichapedzwa muna Gumiguru 2018.
Kwemakore matatu apfuura, iyo Monte-Carlo Beach ine vaviri vaviri vane makore ari pakati pegumi nesere kusvika gumi nematatu ekuberekwa, iyo Société des Bains de Mer: Executive Chef uye maresitorendi ekubatirana pamwechete kuti vagadzire zvekudya zvekudya zvinopihwa panguva yakakurumbira yekudya kweGala kuLa Route du Gout Mutambo unoitwa wega wega Gumiguru.
Vana vane mukana wekuravira zvigadzirwa zvakasiyana uye nekubatsira vabiki mukubika zvakapfava uye gastronomical ndiro. Pamwe chete ivo vanogadzirira iwo wedemhe organic buffet, iyo inoendeswa kune nyanzvi pani pamwe nevakakokwa vashanyi. Iyo inoyerera biodynamic miriwo gadheni inofukidza mazana matatu emamirimita yakanyatsogadzirirwa chiitiko ku Marina yeMonaco.
Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota ona nzira-dout.com , [email inodzivirirwa] kana kuona vhidhiyo.
Zuva reOcean Ocean
Sechikamu chemhemberero dzeWorld Ocean Day muna Chikumi 8, Gungwa reMonte-Carlo rakakurudzira "Sangana & Kwazisai" nemubati wehove ane mukurumbira weMonegasque VaEric Rinaldi kuPort Hercule yeMonaco. Vashanyi vakakokwawo kuti vaungane uye vanakirwe nehusiku hushamwari neChef Paolo Sari ichiteverwa nechikafu chemhando yepamusoro paElsa, iyo yekudyira yakanaka yekudyira.
Zuva reMakungwa Enyika Menyu:
Shrimp tsvuku dzakatsvuka kubva kuSan Remo, mucheche fennel, apricot flavour & nacarii caviar
Scorpio hove Tagliolini pasita ine yakashata inonaka macryry matamati
Yemunharaunda tsvuku mullets, fava bhinzi, puree uye mwana miriwo
Tsvuku michero fungidziro
Yakanaka yekutengesa kofi & mignardises